MASHIINKA PEROSERMNAYA EE BAKEERIGA: MABDA'A HAWLGALKA, NOOCYADA, SAMAYNTA GACMAHOODA - BEERAHA DIGAAGA
Sida loo sameeyo baabuurka perosyamnoy adiga ayaa sameeya
Hawlaha boodhadhka ka dib markii la gowraco waa waqti qaadashada oo aan aad u dhaqso badan. Maanta, waxaa jira noocyo badan oo qalab ah oo mira dhaliya oo dardar geliya rujinta. Mashiinka Perosermnuyu ee boodhadhka waxaa lagu sameyn karaa gacanta ama iibsashada mid ka mid ah noocyada warshadaha. Si aad u sameysid doorasho, waxaa lagama maarmaan ah in la barbardhigo mishiinno kala duwan, mabda'a hawlgalka iyo waxqabadka.
Qaybta shaqadu waa dhululubo wareegsan; dusha sare ee masaafada udhaxeysa midba midka kale waxaa jiri kara faro biliin ah. Moodooyinka xisbiyada, waxay ku yaalliin gudaha silsilad gudaha ah. Qalabka mashiinka iyo aaladaha loogu talagalay layidhka, faruhu waxay ku xiran yihiin mishiinka, kaas oo, inta uu isbeddelayo, shaqada qabto.
Faraha waxaa laga sameeyaa caag adag, waxayna ku jiraan shuban ama dusha sare leh. Hawsha ugu weyn ee dusha sare waa in la jeexo oo laga saaro qalinka.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan faa'iidooyinka hilibka digaaga iyo ukunta.
Qaybta waxaa loola jeedaa makiinada hal-mar ah ee isku roga duufaanta iyadoo la isticmaalayo daroogada. Xiriirka u dhexeeya baalasha iyo faraha faraha ayaa ah biyo, taas oo ah dareeraha shaqada. Sidaa darteed, ka hor inta aanad bilaabin shaqada, shimbirta ayaa lagu riixayaa biyaha.
Qalabaynta mashiinnada perosemnyh
Mashiinnada Perosemnye waxaa loo qaybiyaa guryaha iyo warshadaha. Farqiga ugu weyn ee u dhexeeya iyaga - cabbirka, habka lagu quudiyo baqtigga iyo kala-soocidda.
Mishiinada loo isticmaalo beeraha yaryar waxay u kala baxaan:
Kuwa ugu caansan waa mashiinka xooggan, kaas oo ah silsilad leh faraha gacmaha, saadaalinta. Waxa kale oo lagu dari karaa qalab loogu talagalay biyaha iyo baalasha daadinta, nidaamka qashin-qaadista, qalab kantarooli ah oo xakameynaya xawaaraynta socodka.
Fiiri hilibka digaaga ugu fiican.
Sida caadiga ah rakibidda si buuxda ayuu u shaqeynayaa oo uma baahna waxqabadyo bani'aadamnimo. Mashiinka mashiinka waxaa matalaya mishiinka dabka oo leh dabool leh faraha gacanta ku lifaaqan. Inta lagu jiro hawlgalka, waa inuu shaqeeyaa waa inuu xajiyaa qashinka lagu shaqeynayo ee agagaarka haya'daha shaqada si looga saaro qalinka. Noocyada qoyska waxaa matalaya jeexjeexyada ku jira mashiinka. Waxaa lagu sameeyaa qaab isku mid ah mashiinka mashiinka, laakiin waxay leeyihiin qiyaas yar. Waa hagaagsan yihiin beeraha yaryar ee gaarka loo leeyahay oo leh baahida marxaladaha loo qabo badeecada.
Ogoow sida qashinka gawaarida uu guriga ku dhaco.
Kuraasku wuxuu la mid yahay mashiinka dharka lagu dhaqo ee ugu sarreeya wuxuuna ka kooban yahay:
Istaraatiijka leh saxaarad si biyaha loo daadiyo.
Meydka ku soo noqda duufaanku wuxuu taabtaa faraha, dusha sare ee dusha laga saaro baalasha oo iyaga dibedda u saaraa. Nidaamku wuxuu ku dhacaa saameynta jahwareerka. Hawlaha shaqada, baqtigu wuxuu ku shubaa biyo ka soo galaya si uu u dhaqo boogaha fog. Qaybta hoose ee dhismaha waxaa jira saxaarad ku taala biyaha iyo baadaduhu hoos u dhacaan. Dhamaadka farsamaynta, badeecada la dhammeeyey ayaa laga saaraa mishiinka furan, bacda aderjigu waa la dhaqaa. Iyadoo ku xiran cabbirka, qoob-ka-dhaqaaqyada dhowrka ah ayaa lagu dhejin karaa cutubka waqti. Nidaamka isdabajoogga ayaa ka baaraandegi kara ilaa 600 oo neefta saacaddii.
Waa muhiim! Wixii nadiifin ah, bakhtigu waa in lagu daaweeyaa biyo kulul, isaga oo biyaha ku deynaya isla markaana ka qaadaya biyaha ilaa 10 jeer. Waxay hagaajinaysaa qoyaanka.
Qalabka mashiinka wuxuu ka kooban yahay:
mashiinka dhuxusha oo la adkeeyey;
Dhererka dhaadheer waxaa laga yaabaa inuu ka duwan yahay. Tirada faraha - laga bilaabo 48, iyada oo ku xidhan xajmiga rakibidda, kaas oo lagu rakibay wadiiqada. Bakhtigu waa la quudiyaa mashiinka waxaana qabta hawlwadeenka inta lagu jiro hawlgalka. Faa'iidada qalabkani waa wasaqda aagga ku wareegsan oo leh qalin inta lagu jiro hawlgalka. Si looga badbaado tan, waxaa lagu rakibay qashin khaas ah ama bir caag ah. Moodooyinka noocan oo kale ah ma aha kuwo ku haboon in lagu shaqeeyo qudaarta yar yar.
Waxaan kugula talineynaa inaad ka akhrido sida loo sii wado xayawaanka, sida loo quudiyo, iyo sidoo kale xilliga abuurka ukunta ee digaagduurku yimaado iyo inta ukumo badani ay qaadato maalin kasta.
Perosemnaya nozzle on drill wuxuu ka kooban yahay tuubo leh duufaan yar oo ku xiran. Lagu rakibay maro ama bareeyaha. Waxaa lagu wadaa shukulaatada soo noqota. Hawlgalka, kaliya 1 karbaash ayaa lagu riixi karaa hal mar.
Waxay ka kooban tahay:
dhejin dhexdhexaad ah;
Dhererka faraha ee digaagduurku waa 5 cm, digaagga iyo berriga waa 9 cm, tiradoodu waxay ku qoran tahay 12-24. Foomka meeleynta - oo ah qaab "shan" oo ku saabsan rucubka dominoes. Waqti go'an oo la qabadsiiyo marinka - 30 sa., Digaag - 1.5 daqiiqo. Xirriirku wuxuu leeyahay xadid aan laga bixi karin: waxay keli kartaa 1 kiilo markiiba.
Baro faahfaahinta iyo waxyaallaha gaarka ah ee nuxurka shinnida noocaas ah sida Shiinaha rinjiyeynta, dahabka Manchu, Fircoon, Japanese, Texas iyo Estonian.
Noocyada baabuurta caanka ah
Qalabka perosemnoe waxaa ka mid ah qalabka Talyaaniga, Jarmalka, Shiineeska, Ruushka, Ukraina, Belarusian iyo kuwa kale. Nooc kasta wuxuu leeyahay faa'iido iyo faa'idooyin labadaba.
Faa'iidooyinka ugu badan ee qalabka ajnabiga ah waa:
qaybo tayo sare leh oo la aqoonsan yahay;
kalsoonaanta qalabka korontada.
Dhibaatada ugu weyn ee moodooyinka shisheeye waa qiimaha. Waxay bixin kartaa kaliya markaad ku shaqeyneyso beer weyn. Intaa waxaa dheer, milkiiluhu ma awoodi doono inuu isticmaalo adeegga damaanad-bixiyaha soo saaraha, maadaama inta badan aysan samaynin xarumo adeegyo gaar ah. Sidaa darteed, qaybaha dalbashada waxay noqon karaan dhibaato. Suuqa casriga ah waxaa lagu iibiyaa mishiinno kala duwan iyo faa'iidooyinka isku dhafan ee yurubiyanka ah maaha kuwo gaar ah. Waxa kale oo suurtagal ah in la doorto qaabka tayada gudaha.
Waa muhiim! Si aan loo jeexin maqaarka shimbirta inta lagu jiro ka shaqaynta, isticmaal qalabka lagu rakibo faraha jilicsan ee jilicsan.
Mashiinka la qalooca ee NT 300 waxaa loo isticmaalaa digaagga, digaagga iyo shimbiraha kale ee yaryar.
Tilmaamaha farsamada ee qaabka:
cabbirada - 320x320x570 mm;
dhexdhexaadiyaha - 300 mm;
miisaanka saafiga ah - 10 kg;
waqtiga lagu qaatay 1 shimbir - 20-30 ilbiriqsi;
hal miisaan ayaa la shaqeynayaa - 1-6 quusto;
waxay isku xirtaa caanaha oo leh fiilo ah 220 V;
wax soo saarka - Volgaselmash, Russia.
Qaybaha tayo sare leh. Baalalka ayaa ka sameysan bir birta aan lahayn, taasoo kor u qaadaysa kalsoonida iyo adkeynta.
Qalabku wuxuu leeyahay wax qabad nadiif ah - ilaa 98%.
Soo saaraha ayaa bixiya adeeg hal sano ah.
Waa muhiim! Boorsada waa in ay ahaataa ugu yaraan 1 mitir oo ka fog mashiinka iyo ka korreeya hawsha hawlgalka. Kursiga qasabka ah ee badbaadinta iyo gogol-dhigista.
Mashruuca Perosömnaya NT 400 wuxuu bixiyaa boogaha shimbiraha dhexdhexaadka ah iyo kuwa yaryar - Digaag, digaag, shinbiraha. Masaafada u dhexeysa faraha cirifka ayaa ugu fiicnaanaya hubinta ka saarista tayada sare ee daboolka. Ku rakibidda waa sahlan tahay in lagu hayo, dhaqo iyo jeermiska. Macluumaadka Farsamada:
cabbirada - 560х560х850 mm;
qalabaysan oo leh dhexroor leh dhexroor 400 mm;
wakhti qaadashada - 10-20 ilbiriqsi;
3-10 digaagdarrada ayaa loo shaqeeyaa halkii load;
gaaska gaas - 1.1 kW;
Waxay sidoo kale kaa caawinaysaa inaad barato sida loo sameeyo quudinta quudinta, cabitaanka khamriga iyo naqshadeeyaha digaaga, iyo sidoo kale sida loo dhiso digaagduur lagu daadiyo gacmahaaga.
Jidhka iyo daboolka ayaa ka samaysan bir birta ah oo aan la galin. Qalabku wuxuu leeyahay wax qabad nadiif ah - ilaa 98%.
Aad u sahlan in la isticmaalo iyo waxqabad aad u fiican.
Soo-saaraha ayaa damaanad qaadaya dayactirka bilaashka ah ee cutubka 12 bilood, iyo sidoo kale wuxuu bixiyaa adeeg ka dib iibka.
Qalabka mashiinka dhejinta ah T600mm waxaa loo isticmaalaa in lagu baarto dhammaan digaagga iyo shimbiraha. Waxaa loo qaabeeyey in lagu xakameeyo baqshadaha dhexdhexaadka ah. Waxqabadka - ugu yaraan 100 baqshiish saacaddiiba. 3 baqtigood waa la isku marin karaa.
Ma taqaanaa? Ukunta qudaarta ayaa faa'iido u leh carruurta si loo hagaajiyo horumarkooda jireed iyo maskaxeed. Ardayda Jabbaani waa inay cunaan 2 ukun bakeeriga ah ka hor fasallada.
cabbirka - 750x750x1050 mm;
qalabaysan oo leh dhexroor leh dhexroor oo ah 600 mm;
miisaanka rakibidda - 73 kg;
mashiinka gaaska - 2.2 kW;
wuxuu isku xiraa caanaha oo leh fiilo ah 220 V.
Jidhka iyo dukumiintuba waxay ka samaysan yihiin bir bir ah oo aan qalab lahayn waxayna ku qalabeeyeen faraha qalabka tayada leh.
Mashiinka Perosyomny "Sprut-1000" waxaa loo isticmaalaa in laga saaro baaliga shimbiraha beeraha oo idil. Aad ayay u fududahay in la shaqeeyo oo la sii wado. Qaybo tayo sare leh waxay u damaanad qaadaan duruufaha iyo kalsoonida shaqada.
cabbirka - 960x1000x1070 mm;
qalabeysan oo leh dhexroor leh dhexroor ka kooban - 1000 mm;
miisaanka saafiga ah - 71 kg;
wax soo saarka digaaga iyo digaagga - 1000 gogo 'saacaddiiba, for berriga iyo shimbiraha kale ee waaweyn - qiyaastii 200 gogo';
qaadashada hal mar ah ee shimbiraha yar yar - 20-25 gogo 'waaweyn - qiyaastii 5 gogo';
Awooda waa 1.5 kW;
wuxuu ka shaqeeyaa shabakad ah 380 V, suurtogalnimada qalab hoosta ku xiran sida caadiga ah ee tamarta korontada ah - sida ku xusan amarka.
Qalabka sheyga - qalab biraha lagu rinjiyeeyo. Qalabka dabka - polypropylene nooca cuntada. Suurtagalnimada isticmaalka waxyaabaha ku jira warshadaha cuntada waxaa lagu xaqiijiyay shahaadada nadaafadda. Waxaa jira saxaarad aan xajineynin marka laga reebo shimbir shimbireed. Marka ay joogaan unugga xakamaynta xawaaraha.
Faa'iidada waa suurtagalnimada in qalabka loo adeegsado waxyaallaha caawiya:
Nidaamka waraabka oo leh bilawga automatic;
miiska soodhaweynta ee mashiinka lagu sameeyo.
Ma taqaanaa? Ukunta ukumiintu ma dhicin, sababtoo ah waxay ku jiraan lysozyme - amino acid taasoo ka hortagtaa horumarka microflora pathogenic. Awoodda lysozyme si loo burburiyo qolofka bakteeriyadu waxay u oggolaaneysaa inay la dagaalanto unugyada kansarka.
Waxaan gacmahanno ka dhigi karnaa baabur dusha laga saaro
Qalabka beeraha ee gaarka loo leeyahay oo leh xoolo yaryar, iibinta mashiinka loo yaqaan 'perosuning' ayaa laga yaabaa inaysan aheyn wax aan macquul ahayn. Haddii aad go'aansato inaad sameyso cutubkan oo kale oo gacmahaaga ah, waxaad u baahan doontaa qaybo badan iyo qalab koronto oo loogu talagalay kulanka. Xalka ugu fiican wuxuu noqon karaa in la sameeyo mashiinka perosunnoy oo ku salaysan mashiinka dhar hore - ilmaha. Si aad u sameysid habka santrentruge waa loo baahan yahay:
silsilad ama weel wareega;
hoose ee silsilad, ka samaysan saxan bir ah;
faraha bilyaniga ah;
Baalalka waa la samayn karaa si madaxbannaan, iyada oo lagu hagayo qiyaasaha soo socda:
Baalalka ayaa ka sameysan caag ama alaab. Waa inay noqoto mid sahlan oo lagu nadiifin karo.
Dhexdhexaad - qiyaastii 70 cm.
Dhererka - qiyaastii 80 cm.
Cabbirada noocan oo kale ah waxay suurtogal ka bixineysaa in boogta shimbir shimbir ah iyo bakhaarro badan oo ka mid ah shakhsiyaadka yaryar. Laakiin waxaad dooran kartaa qiyaas kale oo si aad ah ugu habboon walxaha qadiimka ah. Farahaaga laftooda iskuma samayn, sidaas awgeed waxaa lagu iibsadaa dukaanka sidii loo dhigay. Celcelis ahaan, waxay u baahanyihiin inay qaataan qiyaastii 250-300 gogo '. Cabbirka waxaa loo xisaabin karaa:
boodhka - dhexroorka cirifka 10mm, dhererka 50 mm;
digaagga, turkiga, ducks - ballaciisu yahay 20 mm, dherer 90 mm.
Mashiinka ayaa si fiican loo dhigayaa meel u dhow saldhiga si loo dhajiyo boodhka shaqada. Tani waxay kordhin doontaa xasilinta dhismaha waxayna yareyneysaa suurtagalnimada dhaawaca maqaarka inta lagu jiro baareeynta.
Tilmaamaha sameynta baabuurta
Qaab-shaqeedka waxaa loo xiri karaa ama loo dhisi karaa dhismaha. Waxaa laga samayn karaa xagasha biraha ama qoryaha. Wixii cabbiraha kor ku xusan, barxadku waa inuu ahaadaa ugu yaraan 90x90 cm.
Naqshadeynta waa in la siiyaa 1-1.5 kiilo koronto, kaas oo ku xiran madaxa cylinder oo leh xargaha gaariga. Mishiinada waxaa lagu rakibay barxadda.
Goobaha barta silsilada shaqeeya ayaa lagu qodaa si loo xiro faraha faraha. Dhexdhexaadiyaha daloolka wuxuu noqon karaa 9 ama 19 mm, faraha oo leh dhexroor 10 ama 20 mm.
Qeybta hoose ee boodhka ayaa la qoday godad isku mid ah. Dhexdhexaadiyaha godadka waa in ay ahaadaan in faraha uusan ku dhicin inta lagu guda jiro dhufashada boodhka iyaga ku yaal. Dushu waxay ku samaysataa safafka fogaanta u dhexeeya faraha ku xiga - 3 cm. Wareegga ugu hooseeya ee tuubbo dhererka waa inuu ka sareeyaa dhinaca sare ee faraha hoose. Masaafada safka ugu dambeysa ee hoose ee qarkeeda waa inay ahaataa ugu yaraan 50 mm.
Faraha waxay ku jiraan godadka. Si loo hagaajiyo xayndaab, waxaa lagu shiidi karaa ka hor inta aan la galin.
Qeybta hoose ee silsiladda waxaa lagu rakibay qulqulka meeraha iyo ku xiran mishiinka.
Video: sida loo sameeyo mashiinka perosermnuyu ee boodhadhka
Qeyb kasta oo ka mid ah mashiinka wax lagu beddelayo waxaad go'aamineysaa inaad isticmaasho beerta, marka ugu horeysa fiiro gaar ah u yeelo awoodda qalabka rakibay: waa in ay bixisaa xawaaraha wareegga ah ee ku saabsan 1,400 wareega daqiiqadii.
Waa muhiim! Haddii mashiinka laga sameeyo mishiinka da'da ah, waxaad isticmaali kartaa daloolka godka si aad u daadisid biyaha iyo qalinka inta uu ka socdo.
Muhiimad weyn ayaa ah xoogga iyo adkeynta kiiska, xuduudaha korontada ee naqshadeynta. Iyo, iyada oo la raacayo xeerarka fudud, mashiinka perosemna wuxuu noqon doonaa caawiye weyn oo beeralayda ah, waqti badbaadin iyo hubinta in tayo sare leh ee digaagga waaweyn.
Mashiinka loo yaqaan 'Pick-up' waa mid aad u qaali ah, way fududahay in la sameeyo mashiinka qubayska hore. U baahan tahay inaad iibsato kaliya faraha bilyan. Ugu dambeyntii, quruxda noocan oo kale ah, taas oo waxqabadka aan ka duwaneyn mashiinka warshadaha.
Ninkeygu wuxuu ka samaystay mashiinka duugoobay jirkiisa iyo faraha gacmaha ee suuqa. Codso inay u muuqato shimbir qaangaar ah, xayawaanka yaryar ee jeexjeexa maqaarka, waxay ku dhacaan muuqaalka boogta.